Tojalrajas Gabadha ku jecel 30.07.2021 30.07.2021 Comments
10-Calaamadood Gabadha Kujecel Ku Ogaan Kartid-Qish Xalaal Ah Ka Faaideyso!!
U gaar ah dumarka: 10 astaan oo aad ku garan karto nin ku jecel
CAAFIMAAD: 'SEEDKA' Guusha Maareynta Migraine
Halka gabdhuhu ay jecel yihiin in loo sheegto jacaylka, ragguna waxay ka aqristaan indhahooda. Maanfur waxay idiin soo aruurisay astaamo dhab ah oo aad ku garan karto ninka ku jecel. Haddii uu nin xasuusto sheekooyinka ku saabsan qoyskaaga iyo qaraabadaada, taas micnaheedu waa inuu mudnaan siiyo hadalladaada. Wuu ku dhageystaa. Sida uu u jecel yahay inuu agtaada joogo ayaa ka caawineysa inuu maskaxdiisa ku qabto dhammaan macluumaadka kasoo baxa afkaaga.
Waa ku talagal iyo dulqaad uu ka keenayo jacaylka haya. Wuxuu qaddariyaa fikradda haweeneydiisa. Tusaale ahaan, wuxuu jecel yahay in uu adiga kugu caawiyo dhammaan xirfadaha uu leeyahay. Haddaba taasi ma aha astaan fiican. Ninka ku jecel ku tijaabi in uu waalidkaaga la hadlo. Haddii uu diyaar u yahay inuu isla waqtigaas la hadlo aabbahaa, ogow si dhab ah ayuu kuu jecel yahay. Dhib kuma aha inuu xitaa la kulmo aabbahaa oo horay militariga uga tirsanaan jiray, ama ayeeyadaa oo qof ad adag ah.
Inta badan, cunto karinta waxay ragga ku tahay culeys, howl badan ayayna uga baahan tahay. Balse adiga dartaa ayuu diyaar ugu yahay. Ama xitaa waxaa jira mar uu wajigooda xasaasiyad yeesho oo nabro ay kasoo baxaan. Mar ay si aan loo baahneyn u cayilaan ama u caatoobaan. Intaasoo dhan ninka ku jecel uma muuqdaan, mar kastana wuxuu afka ku hayaa quruxdaada, sababtoo ah jirkaaga ma jecla ee wuxuu jecel yahay qofnimadaada.
Ninka sidaas sameeya wuxuu kuu caddeeyay inaad tahay qofka ugu muhiimsan noloshiisa. Waligiis lama tartamo, kama hor imaado balse wuxuu ula dabaaldegaa si wadajir ah. Haddii aad habeen saq dhexe kaddib u baahato in laguu soo iibiyo macmacaan ama laguu kaxeeyo meel, isagoo qanacsan ayuu tallaabo u qaadaa. Miyuusan kaas ahayn jacayl run ah?
Laakiin haddii uu si dhab ah kuu jecel yahay, kama xishoon doono inuu hortaada ku ilmeeyo marka ay wax murugo leh jiraan. Ama inuu kuu qirto inuu daalay. Arrinta ugu weynna waa inuu kuu qirto sida uu uga cabsanayo inuu ku waayo, maadaama aad tahay meesha daciifnimadiisa ay ka imaaneyso marka uu waayo qofkii u taagnaa. Iyo inaad tahay awooddiisa.
Ficil ahaana waxay noqonaysaa qofka aad jeceshay oo markasta aad u keento hadiyado yaryar oo uu ku farxo ama ku faraxdo, taas oo aad ku muujinayso dareenka jacaylka ee aad hayso. Jacayla dhabta ah waxa loo dareemaa si qiiro iyo la yaable, waxaanna la doonaa in qofka aad jeceshahay waqti walba la joogto oo nolosha inta ka dhimman la wadaagto, qofka aad sida dhabta ah u jeceshahay waa ka wanaagaaga doona, haddii aad ficilo xunxun kula dhaqanto kuu dulqaata, waa ruuxa akhrista qalbigaaga iyo waxaad damacsan tahayba, kaas ayaa la yidhaahdaa waa jacayl dhab ah.
Jacaylka iyo kalgacalka beenbeenta iyo dhalanteedka ahina waa ka ay ka maqan yihiin, dhagaysiga, daryeelka, qiimaynta iyo muujinta dareenka jacayl ee aad xambaarsan tahay, waayo jacayl khaaliga ah waxa lagu gartaa qofka oo dhagaysigaaga ka caajisa, qofka oo aan daryeel kuu muujin, ruuxa oo aan ku qiimayn, kuna yasa, daymadiisa, hadalkiisa iyo dabeecadihiisana ka dhadhansan mayso astaamo jacayl oo uu kuu qabo. Jacaylka dhalanteedka ah waxa lagu gartaa qofka oo iska yeelyeela in uu ku jecel yahay, iyada oo afku ka xado erayo aan dhagahaaga raali galinay, jacaylka dhalanteedka ah cimrigiisu ma raago oo waxa uu xidhiidhkiisu ku burburaa muddo yar oo gaaban, kaas oo lagu garto jacaylka khiyaaliga qofka oo ballan kuu qaada oo jar jara, isaga oo ku marmarsooda hawl baan hayey iyo cudur-daaro aan maangal ahaynd.
Ubaxyada Cascas oo laga Mamnuucay Sucuudiga Dawladda Boqortooyada Sucuudiga ayaa mamnuucday iibinta ubaxyada midabada cascas leh ee dareenka jacaylka lagu muujiyo, iyada oo tallaabadan loo qaaday maalinta jacaylka dunida ee loo yaqaano Valentines Day oo innagu soo fool leh awgeed, waxayna dawladdu soo jeedisay in lammaanaha isqaba ay siyaabo kale ku muujiyaan cishqiga u dhexeeya. Sida ay saxaafadda Sucuudigu qortayna guddiga sare ee Boqortooyada u qaabilsan arrimaha diinta ayaaku amray dukaamada ubaxyada iibiya iyo meheradaha kaleba in habayaraatee aanay qofna ka iibin karin ubaxyada cascas, iyadoo meheradaha lagu qabtana laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan, waxa kale oo laga mamnuucay in ay ubaxyada ku soo bandhigan meherahooga hartooda si aanay indhaha dadka u soo jiidanin.
Waxayna guddigu sheegeen in aanay u bannaanayn ummaddaha islaamka inay u dabbaal deggaan xusaska reer galbeedku samaystaan sida maalinta jacaylka dunida, taas oo dhiirigalinaysa in dhallinyarada aan guurka xalaasha ah isku qabin ku kacaan falal fawaaxishah, sida sinnada iyo wixii la xidhiidhaba. Waxayna jariiradu intaa raacisay in mamnuucidan lagu so rogay iibinta ubaxyada cascasi ay horseedi karto in suuqyo madawbi ka furmaan Sucuudiga, kuwaas oo si qarsoodi ah looga iibin doono dhallinyarada raba in ay maalinta jacaylka u dabbaal deggaan, iyada oo xilliyadan oo kalena uu qiimaha ubaxu si qaali ah sare ugu kaco.
Asagoo hadalkiisa sii wato ayaa waxa uu intaasi ku daray markii aan in mudo ah wada soconay ayaa waxaan ku heshiinay guur kabacdina waxaan dhigaynay guur hoosahoosey ah nasiidaro se waxaa warkeena si hoose uga war helay abtigey waxa uuna igu waaniyay in aan arimahaan Farah kala boxo hadii kale aan kala kulmi doona arimo kale Intaas ka dib arinkaas oo ii cuntami waayay ayaa waxaan ula tagay jaceylkeygii una soo bandhigay arinkii iyo wixii aan abti isku odhanay.
Wada hadal dheer ka dib waxaan isku afgaray in aan abti aa ku idhaahdo abti waan iska daayay afka lee ah ee aan uurka jirin. Arinkii kolkii aan u sheegay abti gadaal waa ay udhaafi weyday oo waxaa uu yidhi hadii ay run kaa tahay horteyda halagu kala tago indhaheygoo shanta ah. Halkaas ayaan ku kala baxnay aniga jaceylkeygii maryan, anagoo ku qanacsaneyn sida uu abti wax u waday laakiin waxaas oo dhan waxaa ka weynaayay amarka abti Isku soo wada xooriyoo saaxiibtey maryan waxaan ka wada hadli jirnay qadka anagoon sidi hore isku aheyn.
Alle amarkiis maryan waxaa looga yeedhay Kenya oo uu aabaheed leen America ah uga diyaariyay Kenya deetana aan maqlay in ay uga sii gudubtay U. A Ilaa iyo iminka mahaayo meel aan kala xidhiido Hadaba akhristow hadii ay kugu dhici laheyd Arinkaan oo kale hadii uu ku qabsado maxaad samayn lahayd?
Ubaxyada Cascas oo laga Mamnuucay Sucuudiga Dawladda Boqortooyada Sucuudiga ayaa mamnuucday iibinta ubaxyada midabada cascas leh ee dareenka jacaylka lagu muujiyo, iyada oo tallaabadan loo qaaday maalinta jacaylka dunida ee loo yaqaano Valentines Day oo innagu soo fool leh awgeed, waxayna dawladdu soo jeedisay in lammaanaha isqaba ay siyaabo kale ku muujiyaan cishqiga u dhexeeya.
Waxayna jariiradu intaa raacisay in mamnuucidan lagu so rogay iibinta ubaxyada cascasi ay horseedi karto in suuqyo madawbi ka furmaan Sucuudiga, kuwaas oo si qarsoodi ah looga iibin doono dhallinyarada raba in ay maalinta jacaylka u dabbaal deggaan, iyada oo xilliyadan oo kalena uu qiimaha ubaxu si qaali ah sare ugu kaco. Haddii uu diyaar u yahay inuu isla waqtigaas la hadlo aabbahaa, ogow si dhab ah ayuu kuu jecel yahay.
Dhib kuma aha inuu xitaa la kulmo aabbahaa oo horay militariga uga tirsanaan jiray, ama ayeeyadaa oo qof ad adag ah. Inta badan, cunto karinta waxay ragga ku tahay culeys, howl badan ayayna uga baahan tahay. Balse adiga dartaa ayuu diyaar ugu yahay. Ama xitaa waxaa jira mar uu wajigooda xasaasiyad yeesho oo nabro ay kasoo baxaan.
Mar ay si aan loo baahneyn u cayilaan ama u caatoobaan. Intaasoo dhan ninka ku jecel uma muuqdaan, mar kastana wuxuu afka ku hayaa quruxdaada, sababtoo ah jirkaaga ma jecla ee wuxuu jecel yahay qofnimadaada. Ninka sidaas sameeya wuxuu kuu caddeeyay inaad tahay qofka ugu muhiimsan noloshiisa. Waligiis lama tartamo, kama hor imaado balse wuxuu ula dabaaldegaa si wadajir ah.
Haddii aad habeen saq dhexe kaddib u baahato in laguu soo iibiyo macmacaan ama laguu kaxeeyo meel, isagoo qanacsan ayuu tallaabo u qaadaa.
Miyuusan kaas ahayn jacayl run ah? Laakiin haddii uu si dhab ah kuu jecel yahay, kama xishoon doono inuu hortaada ku ilmeeyo marka ay wax murugo leh jiraan.
thoughts on “Gabadha ku jecel”
Zulkir on Gabadha ku jecel
Copyright © 2021 Gabadha ku jecel. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.